Accueil > Gazetin'ny nosy > Mpiaro ny zon’olombelona: Toa mijery fotsiny ny famonoan’olona ataon’ny dahalo
Mpiaro ny zon’olombelona: Toa mijery fotsiny ny famonoan’olona ataon’ny dahalo
Manontany teny ankehitriny ny olona sy ny fianakaviana ary ny vahoaka izay mitondra faisana noho ny famonoan’olona ataon’ny dahalo sy ny jiolahy tsy misy fiafarany eto Madagasikara ankehitriny. Ireo dahalo sy ny jiolahy indray no mahazo fiarovana amin’ireny fikambanana mpiaro ny zon’olombelona ireny. Matetika aza dia mandefa olona hiaro azy ny fikambanana na manara-maso akaiky ny mahakasika ireo jiolahy ireo na dia hita fa namono olona sy nanao habibiana tamin’olona maro izy ireny. Hatrany am-ponja dia mbola mahazo fiarovana amin’iny fikambanana ihany ireo jiolahy sy dahalo izay namono olona sy nandoro olona velona na koa nandoro ny fananan’izy ireo.
Amin’izao fotoana izao dia saika mahazo vahana noho izany ny dahalo manerana an’i Madagasikara. Tsy voaisa intsony ny olona maty. Maro no kamboty ny zaza Malagasy, tsy misy mpiahy intsony ary tsy misy fanampiana azony. Izany no iainana amin’ny andavan’ndro manerana an’i Madagasikara ankehitriny. Marina fa raharahan’ny fanjakana no miaro ny vahoaka sy ny fananany amin’ny alalan’ny mpitandro filaminana, nefa tsy afaka manao izany intsony ny fanjakana ankehitriny. Ny faritanin’i Fianarantsoa sy Toliara ary Mahajanga no tena mitondra faisana amin’ny asan-dahalo ankehitriny. Manontany ny mpiaro ny zon’olombelona izy ireo ary manainga ny fianakaviambe iraisam-pirenena mihitsy hijery izao zava-misy izao. Ho an’ireo olona any ambanivohitra dia mitanila tanteraka ity fikambanana ity na tsy afaka misahana ny tena asany satria manome vahana ny dahalo sy ny jiolahy indray no fahitana azy.